117 QOF REER SL-AH OO KU XIDHAN XABSIYADA DALKA LIIBIYA IYO BUDHCAD BADEED LAGU QABTAY WAJAALE “Wargeyska Geeska Afrika” | WWW.SOMALILAND.NO
117 QOF REER SL-AH OO KU XIDHAN XABSIYADA DALKA LIIBIYA IYO BUDHCAD BADEED LAGU QABTAY WAJAALE “Wargeyska Geeska Afrika”
Posted on Maarso 26, 2008 by Abdirisak Fadal
Hargeysa(sl.no),26 march – 117 qof oo reer Somaliland ah ayaa ku xidhan xabsi lagu magacaabo Saawiya oo ku yaala caasimadda wadanka Liibiya ee Tiriboli.
Dadkaas oo saddex bilood ka hor galay wadanka Liibiya, waxa laga qab qabtay meelo kala duwan oo wadankaas ka tirsan, waxaana la isugu geeyay xabsi ku yaala caasimadda Liibiya, halkaas oo ay kula jiraan dad kale oo iyaguna u dhashay wadanka Somaliya kuwaas oo tiradoodu tahay 163 qof.
Sida uu xalay khadka Telefoonka ugu sheegay Yuusuf Nuux Yuusuf (Tadhase) oo ah muwaadin u dhashay Somaliland oo sheegay inuu ka mid yahay Maxaabiista Somaliland ee xabsigaas ku jira, waxa uu sheegay inay ku noolyihiin silic iyo darxumo, “Waa lana gaaraacaa, cuntadana waxa saddexda wakhti aanu wax cunaa laba wakhti.” Ayuu yidhi Yuusuf, waxaanu intaas raaciyay, “Waxa nagu jira 15 hablood oo reer Somaliland ah, waxa weliba ku jirta gabadh uur leh oo dhammaantood nala xidhan.”
Mr. Yuusuf, oo la weydiiyay sida uu Telefoon ugu hadli karo isaga oo xabsi ku jira waxa uu yidhi, “Waxaan walaal kugula hadlayaa dhuumasho oo telefoonkaygu wuxuu ku jiraa aamus, inta badana Boolisku nalama joogaan.”
Waxa uu baaq u soo diray dawladda Somaliland, isaga oo yidhi, “Waxaanu dawladda Somaliland ka codsanaynaa in lanaga caawiyo sidii aanu xabsigaas uga bixi lahayn, waayo waxay nagu yidhaahdeen Boolisku la idima celinayo ee weligiin halkaas ayaad ku jiraysaan, annaguna aad ayaanu u darxumaysanahay.”
Yuusuf, waxa kale oo uu sheegay inay jiraan dad kale oo iyaguna Somali ah kuwaas oo uu sheegay inay ku xidhanyihiin xabsi kale oo ku yaala caasimadda labaad ee wadanka Liibiya.
Ugu dambayn muwaadinkan oo ku hadlayay afka dadkaas reer Somaliland ee ku jira xabsigaas, waxa uu dawladda Somaliland mar kale ka codsaday inay ka hawlgasho sidii xabsiga looga sii dayn lahaa muwaadiniinteedaas ku jira xabsiga ku yaala caasimadda dalka Liibiya.
SOMALILAND OO QABATAY QAAR KA MID AH BUDHCAD BADEEDKII PUNTLAND IYO NIN CADDE MUUSE ADEER U YAHAY OO KU JIRA
Dawladda Somaliland ayaa ku guulaysatay inay gacanta ku dhigto qaar ka mid ah budhcad badeedkii dhawaan markaba ku afduubtay xeebaha maamul goboleedka Puntland. Sidaas waxa Wargeyska Geeska Afrika u cadeeyay ilo xogogaala oo ku dhow dhow ciidanka ammaanka Somaliland….
Ilahaas xogogaalka ahi waxa ay tibaaxeen in tirada raggaas la qabtay tahay saddex nin oo ka mid ahaa budhcadii dhawaan xeebaha Puntland ku qaadatay lacag madax furasho ah oo dhan $ 700,000 (Toddoba boqol oo kun oo dollar), ka dib markii ay afduubeen markab laga leeyahay dalka Ruushka. Warku waxa uu sheegay in raggaas ciidanka Hay’adda Sirdoonka Somaliland gabal dhicii shalay ka qabteen Degmada Wajaale, iyagoo markaas u sii gudbayay dhinaca wadanka Itoobiya, waxaana raggaas ka mid ah nin uu adeer ruma u yahay Madaxweynaha Puntland Cadde Muuse Xirsi oo ku caan baxay afduubka maraakiibta, waxaana lala qabtay laba nin oo kale oo uu mid ka mid ahi ahaa darawalkii baabuurka u waday iyo nin kale oo la sheegay inuu ku doodday inuu sii macasalaamaynayay. Raggan ayaa markii la qabtay waxa ay siteen lacag tiradeeda lagu sheegay $ 21000 (Koow iyo labaatan kun oo Dollar) iyo weliba lacag kale oo dhan shan kun oo lacagta Itoobiya ah.
Isku Day Baxsi:
Ilahan xogogaalka ah ee Wargeyska u waramay waxa ay sheegeen in markii ciidanka sirdoonku raggaas qabteen la geeyay xarunta socdaalka ee degmada Wajaale, waxaana raggii halkaas ugu yimid ciidanka Booliska oo la sheegay inay xarunta ku galleen nidaam isku dhex daadsan, kaas oo mid ka mid ah ragga la qabtay u saamaxay inuu isku dayo inuu baxsado. Hase yeeshe wakhti kooban ka bacdi ciidanka hay’adda sirdoonka ayaa mar labaad ninkii ka soo qabtay daanta Itoobiya ee degmada Wajaale, isaga oo la sheegay inuu xilligaas ku gabanayay goob laga dirto Telefoonada.
Warku waxa uu sheegay in saddexdaas nin oo dhammaantood u dhashay deegaanada Puntland ay ciidanka ammaanku ku daba jireen labadii maalmood ee u dambeeyay, waxaana saddexdaas nin iyo labadii nin ee kaleba xalay cawayskii loo soo dhaadhiciyay dhinaa caasimadda Hargeysa.
Magacyada raggaas oo uu ku jiro ninka uu Cadde Muuse adeerka ruma u yahay ayaa waxa ay kala yihiin:
1. Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud
2. Cumar Maxamed Boqor Muuse
3. Cabdicasiis Cabdi Axmed
4. Maxamuud Xasan Siciid
5. Mustafe Cabdalla Axmed
« AGAASIMAHA MACDANTA & BIYAHA OO KA WARAMAY HAWLAHA SAHAMINTA AH EE AY SHIRKADA TGS KA WADO DALKA IYO BOOQASHO WASIIRKA MACDANTU KU TAGI DOONO MAREYKANKA BUDHCAD BAABUUR AFDUUBTAY OO LAGU QABTAY DEEGAANKA HARTA SHEEKHA EE KILILKA SHANAAD EE ITOBIYA »